Floating Ball ကို Valve, အနားကွပ် Valve Check, Threaded Ball ကို Valve - Yongyuan
Floating Ball ကို Valve
သံ Cast သုံးရန်
အနားကွပ် Check Valve
Trunnion Ball ကို Valve
Threaded Ball ကို Valve
ပေါင်းလိုက်သော check valve
Zhejiang Yongyuan Valve Co. , Ltd, ယခင်က, သမိုင်း၏နှစ် 50 နီးပါး၏သမိုင်းနှင့်အတူ 1967 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ Zhejiang Yongkang အဆို့ရှင်စက်ရုံ၏နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျနော်တို့စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်း၏အမျိုးသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားသော, အဆို့ရှင်အဘို့အထိပ်ပေးသွင်းတဦးအနေဖြင့် နှင့် Zhejiang ခရိုင်မှာရှိတဲ့အဆို့ရှင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏သော့လုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလည်းဖောက်သည်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏ဆုလာဘ်ထံမှတုံ့ပြန်ချက်ရတယ်, Zhejiang ခရိုင်မှာရှိတဲ့ထူးချွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဂုဏ်သတင်းကိုရယူလိုက်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးတရုတ်ဓာတုပစ္စည်းကိရိယာများပေးသွင်းတစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတရုတ် Valve အစည်းအရုံး၏ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းနှင့်အမျိုးသားဘောလုံး Valve နျ Standard များ၏စုစည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတပါပဲ။
ဘလော့သတင်း မှစ. နောက်ဆုံးပေါ်
သံမဏိအဆို့ရှင် applications များနှင့် ma ...
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှည်လျားအသက်တာ၏သံမဏိအဆို့ရှင်မဟုတျဘဲသံချေး, ထူးချွန်၏အစိမ်းရောင်နှင့်အခြားအားသာချက်များစက်မှု applications များထဲသို့ဝင်ထားပါတယ်, ပိုက်လိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏လယ်ပြင်တွင်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရန်အဆို့ရှင်ထုတ်ကုန်ပေမယ့်ပြည်တွင်းအဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လာသည် univ မဟုတ်ပါဘူး။ ..
High-ဖိအား va ၏ကောင်းသောစျေးကွက်အလားအလာ ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအဆို့ရှင်ဈေးကွက်တွင်, နိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှလက်ခံနိုင်ဖွယ်အဆင့်အောင်မြင်ရန်ရန်အနိမ့်ဖိအားအဆို့ရှင်အပြင်, high-ဖိအားဆို့ရှင်နေဆဲတင်သွင်းမှုအပေါ်မှီခိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆက်လက်. ကောင်းသောမက်ခရိုစီးပွားရေးအခွအေနေအောက်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းပစ်မှတ်အဆို့ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုထိန်းသိမ်းရန်ရှိပါတယ် ...
ယင်းအဆို့ရှင်ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးနိမ့်အဘို့အကြောင်းပြချက်များကြောင့်စျေးကွက်၏လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့ဖို့, မူရင်းအစိုးရပိုင်ဆို့ရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတစ်အရေအတွက်လျင်မြန်စွာမြို့နယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အနိမ့် Starting Point သို့ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော်လည်း ...
Adress: No.87-89, Mingyuan မြောက်အမေရိကရိပ်သာလမ်း, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်, Yongkang, Zhejiang Provincem တရုတ်
E-mail ကို: cnyvc@cnyvc.com